Dayactirka nidaamka: HowTo chroot | Laga soo bilaabo Linux
Marar badan, gaar ahaan marka aan isku dhex yaacno, waxaan isku aragnay dhibaato ah inaanan awood u lahayn inaan marinno nidaamka dayactirka, laakiin xalka waa fududahay: adeegso amarka kroot laga helo wax LiveCD / RepairCD ah.
Meelo badan (fagaarayaasha, baloogyada ...) amarkan ayaa lagu sheegay oo "nuqul / dhejis" ah oo koodh ah ayaa la bixiyaa, laakiin ujeedka aan u leeyahay qoraalkan ayaa ah in aan sharraxaad ka bixiyo tallaabooyinkaas in yar, si looga faa'iideysto aaladdan, iyadoo aqoon sabab.
2 SIDA LOO
3 Tusaalaha isticmaalka: soo celi GRUB2
Amarka kroot Waxaa loo yaqaan 'CHangeROOT', oo ah, amar kuu oggolaanaya inaad beddesho xididka nidaamka aad ku shaqeyneyso. Si kale haddii loo dhigo: haddii aad ka timid LiveCD oo aad rabto wax kasta oo aad ka shaqeyneyso qunsulka inuu saameyn ku yeesho nidaamka rakibay, waa inaad marka hore isticmaashaa kroot.
Dhibaatadu waxay tahay kuma filna in la isticmaalo kroot Sidan oo kale, ka hor inta aynaan si sax ah u kor u qaadin qaybaha qaarkood.
Marka hore waxaan ubaahanahay inaan bilowno terminal, ama nidaam kale oo rakibay (qayb kale / disk) ama LiveCD. MUHIIM: Qaabdhismeedka LiveCD waa inuu u dhigmaa kan nidaamka la dayactirayo (32 ama 64 jajab).
Marka aan joogno garoonka waxaan ku bilaabi doonnaa aqoonsashada qeybahayaga:
Amarkan waxaan ku soo qori doonaa dhammaan qeybaha / qashinka. Waa inaan cadeeyno midka bartilmaameedka ah, halkaasoo nidaamkayaga hagaajinta lagu rakibay, wixii hada ka dambeeya waanu wici doonaa nidaamka jabay.
Tusaalahan waxaan tixgelin doonnaa in nidaamkeenii burburay uu ku jiro / dev / sda1 .
Waxaan sii wadaynaa inaanu soo ururinno nidaamka. Marka hore waxaan abuureynaa galka aan ushaqeyneyno hadhowna waxaan sare uqaadeynaa qeybta uu nidaamkayaga jaban uu kujiro galkaas
Haddii aad haysato galka / guriga o / var ama wax kale oo ku saabsan xijaab kale, waa inaad ku dhejisaa iyada / s sida soo socota:
FIIRO GAAR AH: Waxaan tusaale u soo qaatay / dev / sda2 kala qaybinta galka / var, mid walbana ha ku hagaajiyo koodhka astaamahooda.
Caadi ahaan tani way kugu filnaan laheyd haddii aad si fudud ugu baahan tahay inaad wax ka bedesho feylasha gacanta, laakiin haddii aan rabno inaan fulino amarro qaarkood oo hagaajiya nidaamka, waxaan u baahannahay inaan kor u qaadno faylal gaar ah oo nidaam ah: / dev, / sooc y / sys
Iyadoo xulasho leh -t waxaan u sheegaynaa Buur nooca "filesystem" aan dooneyno inaan kor u qaadno. Waa lagama maarmaan in la caddeeyo sababta oo ah dabeecadda gaarka ah ee fayllada / sooc y / sys.
Iyadoo xulasho leh -o waxaan cadeyneynaa xulashooyinka Buur. Ikhtiyaarka xira waxay u adeegtaa "isku xidhka". UNIX dhammaan qalabka qalabka waxaa laga heli karaa galka / dev, taasi waa sababta aan ugu qasbanahay inaan kor u qaadno xilligan xaadirka ah / dev galka meesha nidaamkeena jaban uu hada yaalo. Maaddaama faylkan horeyba loo rakibay, waxaa lagama maarmaan ah oo keliya in la sheego Buur halka markii hore lagu rakibey.
Waxaa loo sameeyaa sidan si kroot waxay marin u lahaan karaan faylkan sidii ay ahaayeen nidaamkii burburay, in kasta oo ay tahay inay ka yimaadaan nidaamka hadda jira (tusaale: fadhi LiveCD ah) maadaama ay xiriir la leeyihiin xaaladda nidaamka, geeddi-socodka iyo qalabka.
Hadda waa waqtigii la isticmaali lahaa kroot:
Amarka waxaa loo gudbiyaa sida doodaha wadada xididka cusub «/» (taas oo kiiskeenu yahay / mnt / my_linux) iyo konsol-ka aad rabto inaad adeegsato (xaaladdan waxaan dooranay bash caan ah, oo laga helay / bin / bash). Haddii aynaan cayimin qunsulka, waxaan iska hor imaan doonnaa tarjumaan xoogaa qadiimi ah (ma buuxinayo markii la riixayo tabta, iwm).
Hadda waxaan u adeegsan karnaa qunsulka sidii haddii aan bilownay fadhigii aasaasiga ahaa ee nidaamkeenna burburay (wax ka beddel faylasha, fiiri qoraallada, ku rakibo / tirtiro xirmooyinka ...). DIGNIIN! Isbedelada la sameeyay si ay u dhaqan galaan, waa inaad ka baxdaa nidaamka faylasha markaad baxdo krootFiiri tusaalaha hoose.
Macluumaad dheeri ah gudaha https://wiki.archlinux.org/index.php/Change_Root (in ka badan akhrinta lagula taliyay).
Tusaalaha isticmaalka: soo celi GRUB2
Mid ka mid ah isticmaalka ugu baahsan ee kroot Waxay u tahay qalab lagu hagaajiyo GRUB. Maaddaama haddii cirridku jabaan, ficil ahaan waa wax aan macquul aheyn in la kiciyo nidaamkeena si aan u hagaajino.
Ogaysiis: casharkaan gaaban waa tusaale fudud, wuxuu ka shaqeeyaa qeybinta kala duwan ee laga soo qaatay Debian, Ubuntu iyo openSUSE iyo kuwa kale. Xitaa iyadoo sidaas ah, hubi dukumiintiyada qaybintaada, maadaama inbadan amarka aan laga helin cusbooneysiin-grub.
# FIIRO GAAR AH: amarradan waxay ku shaqeeyaan hal mar jadwalka gudihiisa.update-grub
cunt cusbooneysiin-grub Waxaan cusbooneysiineynaa menu-ga aqrinta GRUB2, sidaas darteed waxaan kudaraynaa wixii soo gala oo maqan. Goor dambe ayaan dib ugu shubi doonaa GRUB diskigayaga, maadaama ay waxyeello gaadhay.
Xaaladdan oo kale ayaan qaatay / dev / sda sida albamka meesha aan ku leenahay nidaamkeena, tani waa in lagu waafajiyaa kiiskaaga.
GRUB-keena waa in horay loo dayactiraa, marka waa inaan ka baxnaa kroot, Kabixi nidaamka faylasha (MUHIIM) oo dib udaji si isbedelada u dhaqan galaan. Haddii aan iloobeyno inaan ka furno nidaamka faylasha, waxaa macquul ah in dib u soo kabashada feylasha aysan si sax ah u furi doonin sidaas darteedna isbadalada qaar saameyn kuma yeelan doonaan.
# waxaan ka tagnay taariikh nololeedexit
# furi nidaamka faylasha oo dib u bilowumount /mnt/my_linux/dev
Waana intaas. Waxaan rajaynayaa inaad ka heshay oo ay ku caawinayso. Salaan!
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Dayactirka Nidaamka: HowTo chroot
Waan isticmaali karaa tan .. Waqtiga qaar waa inaan isticmaalaa.
Midkiin ma adeegsaday Chakra Benz? Hadday sidaas tahay, ma ii sheegi kartaa haddii
ma u fudud tahay isticmaalaha caadiga ah? Waxaan isticmaalaa SolydK oo ah mid aad u fudud laakiin
Waan fahamsanahay in Chakra ay tahay daahir KDE oo aniga ayaa i daneynaya.
Haa, chakra waa mid aad u wanaagsan oo ka fudud ama ka fudud, waxa weeye in rakibidda / tirtirka xirmooyinka waa inaad ku sameysaa qunsuliyadda, maadaama ay weli ku shaqeynayaan maamule xirmo garaaf ah. Iskuday maxaa yeelay way u qalantaa. Waxay isticmaashaa maareeyaha xirmada pacman, oo laga dhaxlay Archlinux, laakiin iska jir, lalama wadaagto meelaha wax lagu keydiyo arch mana ku habboonaan karto. Haddii aad rabto inaad waxbadan kabarato pacman, fiiri arch wiki https://wiki.archlinux.org/index.php/Pacman_%28Espa%C3%B1ol%29
Oktopi horeyba wuu xasilloonaa oo wuxuu si fiican ugu shaqeeyaa celcelis ahaan isticmaale, taasna uma baahnid boosteejada inaad isticmaasho pacman.
Waxaan rajeynayaa in qoraalkan ay soo booqan doonaan dad badan, ka dibna waxay bilaabayaan madaxyadooda inay dib u rakibaan wax walboo chroot ah aad ku hagaajin karto nidaamka had iyo jeer, chroot-ka wuxuu kuu suurta gelinayaa fursado badan, oo ay ku jiraan rakibida Gentoo xD hahaha
wanagsan, mahadsanid ... waligey kubad ma aanan siinin maxaa yeelay live-cd-ka qaarkood oo dayactir ah ayaa aniga ila muuqda inay ku kiciyeen markii hore, laakiin hadda way cadahay, mar labaad waad mahadsan tahay.
Si loo dhamaystiro, way fiicnaan laheyd in la sharaxo sida loo rakibo qaybaha LVM, qeeybinta la xareeyay iyo nidaamyada RAID.
mmm Anigu ma taaban LVM iyo RAID waqti dheer, laakiin ma ila soo socodsiin kartaa xoogaa si aan u dhammaystiro… waad ku mahadsan tahay caarada!
Waa hagaag runta ayaa ah inaan adeegsan lahaa wax weyn.
Aad baa loo qiimeyn lahaa.
fiiri wiki this, waa quruxsan yahay http://wiki.bandaancha.st/RAID_y_LVM_en_Linux
Hadday kaliya mowduucani jiri lahaa toddobaadyo yar kadib, waxay ii soo baxdaa inaan dhibaato ku qabo nidaamkeyga oo waan aqriyaa oo akhriyaa meel walbana waxaan kahelaa chroot iyo blablabla laakiin aniga ima aysan shaqeyn aniga oo ku saleysan talobixinta noolasha ee ah si la mid ah nidaamkaaga, aad ayey muhiim u tahay maxaa yeelay waxaan isticmaalaa x64, midda kale waa inaan ku dhejiyo nidaamka qormooyinka, maxaa yeelay kiiskeyga markii aan dalbanayay jaranjarada iyo kor u qaadista, waxaan tuurayay amar mana aysan aqoonsanin amarka.
Mawduucani wuxuu aadi doonaa faylalka "keydka macluumaadka"
Arch LiveCD (oo leh qalabkan) ayaa ah waxa kaliya ee loo baahan yahay si loo hagaajiyo nidaamkaaga markaad jabiso.
Dhab ahaan! .. ..waxaa loo baahan yahay oo dhan .. xitaa in laga caawiyo qof W Wankooda oo go'aansaday inuusan bilaabin ..
Waxaan marwalba ila haystaa 1gb pendrive oo leh Arch live ... iyo chroot waa wax kasta oo lagama maarmaan ah si dhib kastoo jira, 10 daqiiqo waxaad haysataa wax walba si habsami leh adigoon ka nixin .. 😉
Kaliya waa inaad taqaanaa sida loo sameeyo.
Waad salaaman tihiin, ogow inaan dhibaato ku qabo centos, waxay ii soo dirtaa argagax yar yar iwm. Mana awoodin inaan xalliyo, waxaan ku hayaa degelkeyga iyo keydkeyga xogta ma ogi waxa kale oo aan sameeyo.
Fariin wanaagsan, Waxaan maqli jiray xoogaa chroot ah oo aan gudbay laakiin runtii ma aanan ogeyn sida loo istcimaalo, dabcan waligey uma baahnin waana taas sababta aanan si gaar ah wax u aqrin. Hada qoraalkaaga sifiican ayaa loogu sharaxay, waan ogahay sida loo isticmaalo haddii ay dhacdo.
Aad baad u mahadsan tahay oo jidka ag fadhida, ha noolaado Led Zeppelin hehe.
mahadsanid, ugu dambayntii waxaan ka baxay riyadii badbaadinta ee xun
Runtii waan raacay dhamaan talaabooyinka marka laga reebo umount / mnt / my_linux, maxaa yeelay waxay ii sheegtay inay mashquul tahay, waana ku fikiraa -km, laakiin xitaa taasi ma ahan, waana soo boodayaa ...
Waxaan rajeynayaa inaysan muhiim ahayn….
Ku jawaab kamala
In kasta oo maqaalku horeyba u jiray dhowr sano, haddana waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo qoraaga deeqsinimadiisa uu la wadaagayo waa maqaal weyn maxaa yeelay toddobaadkan dhammaadkiisa wuxuu badbaadiyay noloshayda. Si iskood ah ayaan u rakibey adeege rakibaya xirmo markii aan dib u bilaabayeyna ma rarin. Ka dib seddex maalmood oo aan isku dayay inaan hagaajiyo oo aan akhriyo maqaalo kala duwan, waxaan ku guuleystey inaan halkaan ku soo gaaro si jaanis ah ugu dambeyntiina waxaan awooday inaan dib u rakibo murugada oo aan u hagaajiyo serverka.
Waan ku faraxsanahay inay ku caawisay. Waad ku mahadsantahay faallooyinka!
Waad salaaman tahay, waan ogahay in qoraalkan sanado ka hor, mahadsanidiin weyn ee aan la wadaagay. Anigana shaki ayaa iga galay, kiiskeyga wuxuu dhaawac u geeystay nidaamka iyo waliba wadayaasha shabakada, marka waan raacay talaabooyinka laakiin iima ogola in aan soo dejiyo xirmooyin, ma jirtaa wado kasta oo aan ku xirayo shabakada tooska ah ee terminal-ka
Ka jawaab Helio
Runtii ma fahmin dhibaatadaada… Markaad gasho LiveCD, xarkaha culeyska saarayaa waa midka ka socda LiveCD, sidaa darteed waa inaad awood u yeelatid inaad ku xirto qadka internetka si fiican. Marka isku xirnaanta la sameeyo, iskuday inaad sameyso jadwalka si aad u aragto haddii aad sii wadaysid sii wadiddiisa, haddii kale, waxaa laga yaabaa inaad mar labaad dib u habeyn ku sameyso, laakiin kernel-ka waxyeelleeyey waa inuusan saameyn ku yeelan kalfadhiga.
Haddii aadan faahfaahin dheeraad ah bixin, waan kuu sheegi karaa ...
Wanaagsan Post… mid ka mid ah maqaallada waxtar leh ee yar yar ee laga helo internetka.
Ku jawaab dach
Waad salaaman tihiin, cashar wanaagsan! Si fiican ayaa loo sharraxay, annaga oo ah bini-aadam aan caadi ahayn!
Waxaan qabaa su'aal:
Markii aad sheegtay in haddii ay dhacdo inaad u baahan tahay inaad xirmo xirxirto, aad sameyso cusbooneysiinta nidaamka ama waxqabadyo kale oo gaar ah, oo aad u baahan tahay inaad ku xirto faylasha / dev / proc iyo / sys, aniga ima aysan caddayn haddii faylalkaan ay ku jiraan nidaamka tooska ah ee aan waxay bilaabeen qalabka in la dayactiro, ama haddii ay ku jiraan qaybta xididka oo markii hore la rakibay.
Ku jawaab zopeck
WAAD MAHADSAN TAHAY !!!!
Raadi shabakad SMB / CIFS la'aanteed Samba